Fiainana ara-panahy - Wikipedia
Nandroso sy nivelatra ny hevitry ny teny hoe fiainana ara-panahy rehefa nandeha ny fotoana, ary misy hevitra isan-karazany hita miaraka amin' ny tsirairay. Araka ny mahazatra, ny fiainana ara-panahy dia manondro dingana ara-pivavahana amin' ny fanavaozana izay "mikendry ny hamerenana ny endrik' olombelona tany am-boalohany", miompana amin' ny "endrik' Andriamanitra" araka ny nasehon' ireo mpanorina sy ny soratra masin' ireo fivavahana amin' izao tontolo izao.
Nampiasaina tao amin' ny kristianisma tany am-boalohany io teny io mba hilazana fiainana miompana amin' ny Fanahy Masina ary nivelatra nandritra ny tapany farany amin' ny Andro Antenatenany mba hampidirana ny lafiny ara-tsaina eo amin' ny fiainana.
Amin' izao andro môderina izao, io teny io dia samy niely tamin' ny lovam-pampianaran' ny fivavahana hafa ary niitatra mba hilazana traikefa mivelatra kokoa, ao anatin' izany ny lova esôterika sy lova ara-pivavahana. Ny fampiasana môderina dia mazàna manondro traikefa amin' ny lafiny masina sy ny soatoavina aman-kevitra lalina indrindra iainan' ny olona, matetika ao anatin' ny toe-javatra misaraka amin' ny andrim-pivavahana voarindra. Izany dia mety ho tafiditra amin' ny finoana ny faritra mihoatra ny voajanahary, mihoatra ny tontolo hita maso mahazatra, fampandrosoana ny tena manokana, ny fikatsahana dikany faratampony na masina, ny traikefa ara-pivavahana, na fihaonany amin' ny "refy anatiny" manokana .
Mifandraika amin' ny fomba fijery filôzôfika ny fiainana ara-panahy, noho izy misy fifanoheran' ny raha sy ny fanahy (jereo ny olana vatana/fanahy) na koa ny anatiny sy ivelany. Mamaritra ny asan' ny fanahy izy amin' ny maha mifandray amin' ny tenany ihany, ka misaraka amin' izay tsy izy na tsy misy intsony. Noho izany, ny zavatra rehetra mifandraika amin' ny fomban' ny fanahy dia raisina ho ara-panahy. Manambara ny spiritoalisma izany.
Izy io koa dia manondro ny fikatsahana heviny sy fanantenana na fanafahana ary ireo dingana mifandraika amin' izany (fidirana amin' ny sata vaovao, fombafomba, fampivoarana ny tena manokana, New Age). Azo raisina ihany koa, ary vao haingana kokoa, fa misaraka amin' ny fivavahana na ny finoana an' Andriamanitra, ka mahatonga ny "fiainana ara-panahy tsy misy fivavahana" na ny "fiainana ara-panahy tsy misy andriamanitra".
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiainana_ara-panahy&oldid=1043833"
Voaova farany tamin'ny 11 Febroary 2022 amin'ny 10:53 ity pejy ity.